Wadaadada Muqdisho oo loo soo jeedinayo ineysan u talaabin dhismaha maamul- dowladeed ku saleysan diin iyo iney ka dambeeyaan maamulka degaanka Muqdisho inta ay kula faltami lahayeen safka hore iney kula dagaalamaan dagaaloogayaasha Muqdishu
Buluugleey, March 5, 2006
Wadaadada dhisay maxkamadaha ka jira Muqdisho waxey sameeyeen garsoor looga baahan yahay meel ay ku nool yihiin dadweyne ka kooban 3 milyan, haddana ay ka jirto kala dambeyn la’aan. Wadaadadu waxey ku shaqeynayaan mushaar la’aan, wax canshuurana kama qaataan adeegyada ay u fidinayaan dadweynaha.
Dagaaloogayaasha Muqdisho dagaalkii ay ku soo qadeen wadaadada muqdisho wuxuu ahaa mid gardaro ah oo aysan mudneyn cid ka soo shaqeysay kala xaqsiinta dadka isku heysta dacwadaha hantida iyo kuwa dembiyada laga galo dadka.
Wadaadada lama fiirin howsha ay u qabteen dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho laakiin waxaa loo soo abaaray heybtooda iyo fikradooda salka ku haysa diinta Islaamka.
Waxaa Muqdisho ku soo xoogeystey waxbarashada lagu qaato luqada Carabiga, sidoo kale waxaa soo batay dadka waxbarashada u doonanaya wadamada Carabta. Dhinaca kale waxaa sii xoogeysanaya taageerada ciidan ee dadku u hayo wadaadada, taas oo dhalisay in kumanaan dhalinyaro ah ay naftooda u hurayaan si ay ula dagaalamaan dadka ka soo horjeeda wadaadada. Intaas oo dhan ayaa sabab looga dhigay soo ifbaxa xukunka wadaadada ka dhaqangalay magaalada Muqdisho.
Dhalinyarada ku soo barbaartay xiligan uu Soomaaliya ka jiro dagaalka sokeeye fursad uma helin waxbarasho ay ku yeeshaan xirfad, dalkana waxaa ka jirta shaqo la’aan 100% ah, arrintaasna waxaa loo arkaa iney fursad dahab ah u tahay qolooyinka wadaadada oo dhaqanka diinta awgeed dadka ku soo leexsanaya madaama aysan hadda ka shaqeyneen dalka nidaamyadii dowladeed ee ka yimid dalalka Yurub. Waana dareenka nuucaasa mida ku weyn cabsida laga qabo wadaadada oo ka imaanaya dalalka shisheeyaha.
Inkasto wadaadadu aysan geysan wax xumaana, haddana waxaa lawada arkay ineysan Soomaaliya diyaar u ahayn dowlad islaamiya dadka oo aqoontoodu aad u liidato awgeed. Hadda ka hor dalka waxaa ka hirgeli waayey mabda’ hantiwadaaga oo ay wateen nidaamka keliteliska oo ay hogaanka u hayeen madax milateri iyo dimoqaraadiyada ay wax ku maamulayeen madax rayida oo musuqmaasuqa. Dhamaan mabda’yadaas waxey u mirodhaliwaayeen waxaa sabab looga dhigaa dadka Soomaaliyeed oo inta badan aqoontoodu ay aad u liidato iyo iyagoo dhaqanka reer guuranimo uusan kabeyn nidaamyada ilbaxnimada salka ku haya. Sidaasna mabda’yadu waxey la dhamaanayaan ama ku kooban yihiin kooxda aaminsan, rajana lagama qabo iney u gudubto dadweynaha.
Dadka haddii uu ka baxo dhibaatada dhaqaale iyo tan nabadgelyo darrada ah waxaan shaki lahayn in rabitaanka dadku uu ka turjumayo heerka uu gaarsiisan yahay garashadooda ka soo jeeda dhaqanka reer guuraanimada. Arrintaasna waxey u dhamaneysa in dalka aysan ka hirgelin nidaamyada aysan dadku sinji ahaan u lahayn oo dibeda looga soo dhoofiyey.
Dadka Soomaaliyeed ee dibeda ku dhaqan ayaa intooda badan qaba in wadaadada ay dib uga gurtaan dagaal ay la galaan walaalahooda Soomaaliyeed oo ay kala aaminsan yihiin mabaadi’ kala duwan. Sidoo kale waxaa lagula talinaya wadaadada ineysan soo jiidan indhaha dalalka shisheeyaha ah oo la dagaalamaya wadaadada, taas oo keeni karta in dhibaato ay ka soo gaarto rayidka aaminsan diinta, waxyeeladaas oo saameyneysa ganacsigooda iyo naftooda.
Hadda lama joogo wakhtigii dagaal diineed dalka laga abuuri lahaa. Waxey ku wanaagsan tahay in wadaadadu ay awoodooda ku kaalmeeyaan nidaamka ay hogaaminayaan madax rayida oo aan dhibaato ku hayn dhaqanka diinta Islaamka. Haddii taas la waayo oo wadaadadu ay galka seefta ka siibtaan, kuna adkeystaan iney safka hore soo galaan. Dhibaatada arrintaas ka dhalaneysaa ma ahan wax sahlan, waana fursad qiil loogu helayo in dowlado shisheeye ay dalka soo geliyaan ciidan geysta gumaad la hugiyo magac aduunka looga helayo iney ka gaabsadaan ka hadlka dhacdooyinka la xiriira howlgaladaas.
Dagaalkii wadaada iyo dagaaloogayaasha Muqdisho wuxuu dhiig ka daadiyey walaalo Soomaaliyeed oo heybtoodu isku mid tahay. Waxaa la arkayaa in wadaadada iyo hogaamiye kooxeedyada uusan midna keeni karin maamul ay isku raaci karaan oo ka shaqeeya Muqdisho, sidaas daradeed waxaa haboon in la xoojiyo maamulka dowlada loo soo dhisay degaanka Muqdisho, kaas oo loo baahan yahay inuu ka madaxbanaanaado qolooyinka wadaadada ah iyo hogaamiye kooxeedyada, taasi waxey fursad u tahay ineysan labadan dhinac dagaal dambe isugu imaan, aduunkuna wuxuu la soconayaa hogaanka maamulka Muqdisho inuusan ka turjumeyn magacyada ay dalalka shisheeye ku ugaarsanayaan. Inkaso maamulka Xamar uu yahay mid iska liita haddana dantiisu waa inuu bulshada degan Muqdisho u noqdo dhexdhexaad kala badbaadiya isku dhacooda.